I-Israel: Ukweqa okubalulekile kwesibalo se-antibody ngemuva kwe-4th COVID-19 jab
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » I-Israel Breaking News » I-Israel: Ukweqa okubalulekile kwesibalo se-antibody ngemuva kwe-4th COVID-19 jab
Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba zikaHulumeni • Health News • I-Israel Breaking News • Izindaba • Abantu • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Ubuchwepheshe • Ezokuvakasha • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje
Ukwenyuka kwezinguquko ezintsha ze-COVID-19, njengeDelta futhi, muva nje, ukwahluka kwe-Omicron, kubikwa ukuthi kusize ukwehlisa ukuvikelwa okunikezwa yizibhamu, nokuphinde kwabangela nezingcingo zokuthi kukhishwe ama-booster, kanti i-Israel ihola leli cala njengenye ye amazwe okuqala ukusabalalisa imithamo eyengeziwe.
Icaphuna imiphumela yesilingo sokuqala, I-Israel UNdunankulu uNaftali Bennett umemezele ukuthi umuthi wokugomela i-COVID-19 wesine "cishe" uzosho "ukwanda okukhulu" kokuvikela ekuthelelekeni, ukulaliswa esibhedlela kanye nezimpawu ezinzima, wengeza ngokuthi izikhulu manje sezikwazi "ngezinga eliphakeme lokuqiniseka" ukuthi okunye I-booster dose izovikeleka ukuze isetshenziswe kabanzi.
Ngesikhathi kunengqungquthela izolo yabezindaba eSheba Medical Center, empumalanga nje Tel Aviv, uBennet utshele izintatheli ukuthi umthamo wesine womuthi wokugomela i-Pfizer's coronavirus ukhulise isibalo samasosha omzimba ngokuphindaphindeka kwabahlanu kubahlanganyeli ocwaningweni olusha lwase-Israel, ephakamisa ukuthi okunye ukudubula kuzosiza ukuvuselela ukungatheleleki.
"Siyazi ukuthi isonto ngemuva kokuphathwa komthamo wesine, sibona ukwanda okuphindwe kahlanu kwenani lamasosha omzimba kumuntu ogonyiwe," kusho uBennett.
"Ngokusobala, lokhu kuzokhombisa izinga eliphezulu kakhulu lokuvikela kunangaphandle komthamo wesine, maqondana nokutheleleka kanye nokusabalala kwegciwane kanye nokugula kakhulu."
Icala liqale ngasekupheleni kukaDisemba futhi labona abasebenzi abangu-150 baseSheba Medical Centre bethola isikhuthazo sesibili. Yize abasebenzi base bevele bethathile imithamo emithathu ye-Pfizer-BioNTech jab, amazinga abo e-antibody abonakale ehla kakhulu ezinyangeni ezine noma ngaphezulu kusukela ekukhuleni kwawo kokugcina, ngokuhambisana nobunye ubufakazi bokuncipha kokungazweli okunikezwa yimithi yokugoma etholakalayo.
Ukwenyuka kwezinguquko ezintsha, njengeDelta kanye, muva nje, okuhlukile kwe-Omicron, kubikwa ukuthi kusize ukwehlisa ukuvikelwa okunikezwa yisibhamu, futhi kwabangela izingcingo zokuthi kukhishwe ama-booster, kanti i-Israel ihola leli cala njengelinye lamazwe okuqala ukusabalalisa imithamo eyengeziwe. Ngemuva komkhankaso wayo wokuqala wokukhuthaza, Israel muva nje uqale ukunikeza imithamo yesine ezakhamuzini ezineminyaka engaphezu kuka-60, lezo ezinamasosha omzimba asengozini, kanye nabasebenzi bezokwelapha, basebenzisa inqubomgomo ngisho nangaphambi kokuba kungene imiphumela yakamuva yocwaningo.
Kodwa-ke, ngenkathi uhlobo lwe-Omicron olusabalala ngokushesha lubangele i-alamu emhlabeni wonke - kanye negagasi lemikhawulo emisha, imiyalo yesikhathi sokubuya ekhaya kanye nokuvalwa kwezindawo - okutholwe kusenesikhathi kuphakamisa ukuthi okuhlukile kubangela izimpawu ezithambile kunezinguquko zangaphambilini.
The Inhlangano Yezempilo Yomhlaba (WHO) uthe ubufakazi bungachaza “ukuhlehliswa” phakathi kwezinombolo zokutheleleka ezikhula ngokushesha nsuku zonke kanye namazinga aphansi okulaliswa esibhedlela kanye namazinga okufa uma kuqhathaniswa emhlabeni wonke, ngisho nokuphakamisa ukuthi u-Omicron angaba “yizindaba ezinhle” uma izifundo ezengeziwe ziqinisekisa leyo miphumela.